Nandray fepetra ny Filoha : Nosoloina ny minisitry ny Filaminam-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaNandray fepetra ny Filoha : Nosoloina ny minisitry ny Filaminam-bahoaka
03/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nesorina rehefa tsy nahomby….Efa hita koa fa tsy voafehin’ingahy minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha ny toe-draharaha tany Antsakabary Befandriana Avaratra, toerana fiavian’ilay senatera mpanohitra mbola hifampitadiavana iny.
Andrianisa Mamy Jean-Jacques indray no minisitry ny Filaminam-bahoaka vaovao. Nivoaka teo anivon’ny filan-kevitry ny minisitra, omaly, ny didim-panjakana laharana 2017 – 148 manafoana ny fanendrena an’ingahy Andra Norbert André nisahana io toerana io teo aloha.
Tsy takona afenina fa niteraka savorovoro teo amin’ny fiarahamonina politika ilay raharaha Befandriana Avaratra, taorian’ny fanambarana nataon’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha. Nororitin’ny mpanao politika ilay izy ary tena nivadika ho resaka politika mihitsy aza izany taty aoriana. Tsy voafehin’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka intsony koa ny fihitaran’ny pitik’afo samihafa tamin’ity raharaha tao an-tanàna niavian’ny senatera Lylyson ity.
Nanome toky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa handray fepetra amin’izay rehetra nanao fandikan-dalàna tamin’iny raharaha Befandriana Avaratra iny. Eny fa na misy tompon’andraikitra ambony aza, dia tsy misy an-kanavaka fa hiharan’izany fandraisan’andraikitra izany avokoa. Io toetra mandray andraikitra anatina fanapahan-kevitra hentitra, mba hisian’ny filaminana iombonana io no mampiavaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Io tokoa àry fa nipoitra ilay fandraisan’andraikitra avy aminy. Efa fampitandremana ho an’ireo minisitra hafa, matetika mitsivalam-pandry amin’ny raharaha sahaniny ihany koa io fanapahan-kevitra io.
Nampitony sahady ny tebitebin’ireo vahoaka miandrandra fandraisana andraikitra avy amin’ny fanjakana foibe ity fanapahan-kevitra noraisin’ny filoham-pirenena omaly ity. Mazava izao fa mihainona ny feom-bahoaka tokoa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, eo anatrehan’ny trangan-javatra mahabe resaka toy ity raharaha Befandriana ity.
Tsy manafoana ny asan’ireo “komity manokana” miandraikitra ny fanadihadiana momba ny raharaha Befandriana Avaratra kosa izao fahazoana minisitra vaovao izao. Ny minisi-panjakana Narson Rafidimanana moa no mitarika azy io, izay ahitana zandary miisa telo sy polisy miisa telo. Manaporofo amin’ny vahoaka ny fitondrana foibe fa afaka mandray “decision” hentitra ho soa iombonan’ny rehetra.